“म झुक्दै न झुक्ने नेपालको छोरो’ « Anumodan National Daily
“म झुक्दै न झुक्ने नेपालको छोरो’
By : मुकेश टंर्रा/संवाददाता
प्रकाशित मिति : २० फाल्गुन २०७६, मंगलवार ०८:४७
धनगढी/ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता भीम रावल खरो नेता र स्पष्ट वक्तामा पर्छन् । उनी कडा स्वभाव तथा चोटिलो बोली र आफ्नै सरकार तथा पार्टी नेतृत्वको कडा आलोचकका रुपमा सधैं चर्चामा हुन्छन् ।
सुदूरपश्चिम साहित्य समाजको आयोजना तथा प्रदेश सरकारको मुख्य प्रबद्र्धनमा धनगढीमा जारी विश्व नेपाली साहित्य महोत्सवमा आयोजकले उनीसंग बहस गर्न “म झुक्दै न झुक्ने नेपालको छोरो’ शिर्षक राख्यो । पत्रकार हरिबहादुर थापासंगको बहसमा नेता रावलले शिर्षकलाई पुष्टी गरे ।
“म प्रतिपक्ष होइन’ उनले भने– म सधैं राष्ट्रको स्वाभिमान, राष्ट्रको गौरव र जनताको पक्षमा उभिन्छु । यस्तो गर्दा भन्नेले प्रतिरक्षक भन्न खोजेका होलान् । तर जिब्रो लरबरिएर प्रतिपक्ष सुनिएको होला ।
उनले देशका लागि गरेरै छोड्ने दरिलो र बलियो भावनाको कमी रहेको बताए । उनले भ्रष्टाचार गर्ने विरुद्ध साहित्य लेखेर र गित गाएर पनि आवाज उठाउनु पर्ने बताए । कम्युनिष्ट पार्टीले भ्रष्टाचारीलाई छोड्दै नछोड्ने नेता रावलको दावी छ ।
उनले अत्यधिक सुविधा भोग गरेको भए नेतृत्वले नै छोड्ने शुरुवात गर्नुपर्ने बताउँदै भने, ‘मैले जहाँ पनि हिडेर जान तयार छु । तर जनता हिड्न मान्दैनन् । प्रविधि र युगले दिएको क्षमता र आवश्यकता अनुसारको सुविधा लिनु नराम्रो होइन । तर बढि सुविधा छोड्नुपर्ने भए, पानी मुलबाटै बग्छ ।’
नेता रावलले महाकाली सन्धी गर्दा त्रुटी भएको बताए । उनले आफूले सचेत गराउँदा गराउँदै पनि सो सन्धीमा लिम्पियाधुरा महाकालीको मुल हो भन्ने शब्द नपारिएको बताए । उनले यो गर्नका नेकपाका तत्कालीन नेतृत्वले त्रुटी गरेको स्वीकार गरे ।
मन्त्रीका सपना : विकासका योजना
महोत्सवमा “मन्त्रीका सपनाः विकासका योजना’ शिर्षकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहरा र सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले बहस गरे ।
पत्रकार शिवराज भट्टले सहजीकरण गरेको बहसमा कानुनमन्त्री शाहले संविधानले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई दिएको भएपनि प्रहरी प्रदेश मातहतमा संघीय सरकारले नदिएकाले विरक्त लाग्ने गरेको बताए ।
“संविधानले शान्ति सुरक्षा व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी हामीलाई दिएको छ,’ मन्त्री शाहले भने, ‘तर हाम्रो मातहतमा अझै प्रहरी आएको छैन । कहिलेकँही सेना विनाको सेनापति बनाइदिएको भन्ने सोचेर विरक्त लाग्छ ।’
उनले सहभागीको प्रश्नमा भने, ‘हाम्रो मातहतमा प्रहरी छैन । भएको भए हामीले निर्मला पन्तको हत्याको छानविन नजिकबाट गर्न पाउँथ्यौं । छिटो समाधान पनि गथ्र्यौ । प्रदेशमा प्रहरी नहुँदा हामीले हत्यारा पत्ता लगाउनुस् भन्नु बाहेकको अधिकार रहेन ।’
आर्थिक मामिला मन्त्री झपटबहादुर बोहराले गतवर्षको बजेट ६० प्रतिशत खर्च गरेको दोह¥याए । उनले चालु वर्षको १५ प्रतिशत खर्च भइसकेको बताउँदै आर्थिक वर्षको अन्तसम्म कम्तिमा ९० प्रतिशत खर्च हुने दावी गरे ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको एम्बुलेन्स खरिद प्रकरण साहित्य महोत्सवमा पनि चर्चा पायो । सामाजिक विकास मन्त्री सुवेदीले भने, ‘एम्बुलेन्स भनेर विश्वमा कही पनि भन्दैन । गाडीको इन्जिन र च्यासिस बन्छ । पछि आवश्यकताका आधारमा एम्बुलेन्स, ट्रक, बस बन्छ ।’
उनले एम्बुलेन्समा आकस्मिक सेवाका उपकरण समेत जडान गर्नुपर्ने भएकाले ठूलो साइजको एम्बुलेन्स ल्याएको स्पष्ट पारे । उनले एम्बुलेन्स ठूलो देखेर कतिपयले ट्रक भनेको बताए । ‘केहीले विरोध गरेपनि धेरैले यसको प्रशंसा गरेका छन्,’ मन्त्री सुवेदीले भने, ‘हाम्रोमा नकारात्मक कुराको प्रचार र चर्चा बढि हुन्छ । यही एम्बुलेन्स सेना, युएन, प्रहरी र प्राइभेट अस्पतालले पनि चलाएका छन् । प्रदेश सरकारले यही एम्बुलेन्स ल्याउँदा विरोध किन ?’
सामाजिक विकास मन्त्रालयले विद्यालय भवन, क्याम्पस भवन, खेलकुद मैदान निर्माण लगायतका काम गरेको विवरण प्रस्तुत गर्दै मन्त्री सुवेदीले राम्रो कामको पनि बाहिर ल्याइदिन आग्रह गरे । उनले कर्मचारी भर्नामा पनि मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धा नै गरेको दावी गरे ।
साहित्य महोत्सवको सोमबार ‘सीमान्त सपनाका एैंठन’ शिर्षकमा सांसद् डा. विजय दत्त, डा. गोपाल दहित र पूर्व सभासद् अफिलाल ओखेडाले उमिद वागचनसंग बहस गरे । ‘कविता मुक्तिको खोजी कि छन्दको बन्धन’ शिर्षकमा नवराज लम्साल, सरिता तिवारी र ललिजन रावलले मनोज न्यौपानेसंग बहस गरे । ‘टेलिभिजन क्रेजः हिजो, आज र भोलि’ शिर्षकमा विजय कुमार र रवि लामिछानेको चर्काचर्की भयो । ‘जीवन ः पर्दाभित्र, पर्दाबाहिर’ शिर्षकमा महानायक राजेश हमाल, नयनराज पाण्डेसंग अन्तरंग गरे । ‘मेरो सपना ः मेरो शहर’ शिर्षकमा धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृपबहादुर वड र भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्ट पत्रकार चित्रांग थापासंग शहर बनाउनेका सपना बाँडे ।
लेखक गणेश नेपालीको सहजीकरणमा कविहरुले काव्य सभा रचे । सोमबार नै प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा देउडा प्रतियोगिताको छिनोफानो भयो ।